I-Internet Ministries - Izinsiza
Isikhungo Sezinsiza ZamaKristu
Siyabonga ngokuvakashela isikhungo sethu sobuKristu. Leli khasi lezinsiza lenziwe ukuze kuzuze wonke amaKristu nalabo abafuna ukwazi okwengeziwe ngeNkosi. Sihlanganise uhlu lwemithombo yamaKristu e-intanethi ezosiza ukusiza abangcwele ngenkonzo ngokusebenzisa ulwazi lweZwi likaNkulunkulu. Wonke ama-Bookstores Christian kanye nezincwadi ezibhalwe kulesi sigaba zinomnikazi futhi aqhutshwa amalungu amasonto kaKristu.
KuMenyu Eyinhloko okubalwe ngenhla ungachofoza kunoma yiziphi izixhumanisi ezitholakala kuthebhu ethi "Izibonelelo" ukuze ufinyelele usizo lwe-intanethi nezihloko ezithakazelisayo.